आजदेखि के खुल्छ, के खोल्न पाइँदैन? – NepalajaMedia
काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबारबाट ‘सीमित निषेधाज्ञा’ लागू गरिँदैछ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सामूहिक बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो।
निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै केही क्षेत्रलाई बन्देज लगाएर धेरैजसो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा खुलाइएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए।
‘निषेधाज्ञाको पनि विभिन्न स्वरूप हुन्छन्, निषेधाज्ञालाई कायमै राखेर पनि धेरैजसो क्षेत्र खोल्ने नखोल्ने निर्णय गर्न सकिन्छ,’ दाहालले भने, ‘आजको बैठकले त्यसरी नै निर्णय गरेको हो।’
उनका अनुसार अब सार्वजनिक/निजी सवारीसाधन चल्दैछन्, तर जोरविजोरमा। स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
१६ सिटभन्दा माथिका सवारीसाधन चल्छन्। तर, माइक्रो बस, टेम्पो चल्दैनन्। ट्याक्सीलाई भने रोक लगाइएको छैन।
‘अहिले ट्याक्सीले एम्बुलेन्सको काम गरिरहेका छन्, ट्याक्सीमा तीन जना मात्र रहने भएकाले जोखिम कम भएकाले सञ्चालन गर्न दिइएको हो,’ दाहालले भने, ‘प्राय: परिवारकै सदस्यहरू बढी रहने भएकाले जोखिमको स्थिति रहँदैन भन्ने बुझाइ छ।’
दाहालका अनुसार भोलिदेखि सबै खालका पसल खुल्नेछन्, तर बढी भीड हुने ठाउँहरूलाई साताको तीन दिन मात्र खोल्न दिइने छ।
कपडा, जुत्ताचप्पल पसल, फेन्सी, कस्मेटिक पसल पनि खुल्नेछन्। तर, सोमबार, बुधबार र शनिबार तीन दिन मात्र समय दिइएको छ। सपिङ मलहरूलाई पनि सोही नियम लागू गरिएको छ।
अत्यावश्यक सेवामध्ये खाद्यवस्तु, दुध, दुधजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, माछा/मासु बिक्री वितरणमा समय तोकिएको छ।
त्यस्ता पसल बिहान ११ बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खोल्न दिइने छ। यसअघि बिहान ११ बजेसम्म मात्र खोल्न दिइँदै आएको थियो।
अब टेक अवे सेवा साथै अनलाइन डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिने छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मध्याह्न १२ देखि बेलुका ७ बजेसम्म खुला गरिएको छ।
बैंकहरू यसअघि नै सुचारु थिए। अब सहकारी पनि खोल्न पाइने छ। तर, सहकारीलाई बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म खोल्न दिइने छ।
शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छ। उपत्यकाका सबै नाकाहरू साबिकझैं बन्द रहनेछन्। उपत्यकाभित्र मात्र सवारी चलाउन पाइने छ।
भाँडा-भान्साका सामग्रीका पसल पनि खुल्नेछन् तर आइतबार, मंगलबार र शुक्रबार मात्र। फर्निचर र अटोमोबाइल पसल सोमबार र बुधबार मात्र खोल्न पाइने दाहालले बताए।
वर्कसपहरू बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्मै खुल्नेछन्।
फुटपाथ, ठेला व्यापार, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बिहान ११ बजेसम्म र अपराह्न ४ देखि बेलुका ७ बजेसम्म खुल्ने छन्।
दाहालका अनुसार होटल, रेष्टुरेन्ट र बार खोल्न पाइने छैन। खुल्ला स्थानमा सभा-जुलुश, जात्रा महोत्सव हुन दिइने छैन। मठ-मन्दिर, मस्जिदमा दैनिक पूजाआजाबाहेकका काम गर्न पाइने छैन।
उद्योग र कलकारखाना चल्न दिइन्छ। तर, स्वास्थ्य मापदण्डविपरीत चलाउन पाइँदैन। चाडपर्वमा हुने जमघट हुन दिइँदैन। शैक्षिक संस्था चल्ने छैनन्।
गोष्ठी, सेमिनार, शैलुन, स्पा, ब्युटी पार्लर खुल्ने छैनन्। चिडियाखाना तथा प्रदर्शनीहरू बन्दै रहने छ। श्रमिक-मजदुरलाई सामाजिक दूरी कायम नगरीकन ओसारपसार गर्न पाइने छैन।
राजधानीमा कोरोना संक्रमण व्यापक बढेपछि प्रशासनले भदौ ३ गते राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। साता-सातामा दुई पटक निषेधाज्ञाको समय बढाइएको थियो।
निषेधाज्ञा निरन्तर भइरहँदा आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएपछि प्रशासन लचिलो भएको प्रजिअ दाहालले बताए। यसअघि मंगलबार सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गर्दा पनि चाडबाड नजिकिएका कारण आर्थिक गतिविधिहरू हुनुपर्ने राय पेश भएको थियो।
दाहालका अनुसार अहिले लागू भएको निषेधाज्ञाको पनि स्वरुप परिवर्तन हो। ‘संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यो निर्णय क्रमश: हटाउने वा जारी राख्ने निर्णय हुनसक्छ,’ दाहालले भने।
Prevपाल्पामा जनप्रतिनिधिसहित २८ जना कोरोना सङक्रमित थपिए
Nextमेलम्चीपछि याङ्री र लार्केको पानी राजधानी ल्याउन टिबीएम प्रविधिको सुरुङ बनाइने
दाहाल-नेपाल समूहको अनेरास्ववियुद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा
भोलिदेखि हिँडडुल गर्न समेत रोक (7186)
नेपालमा पनि यति गते बाट टिकटक बन्द हुदै (3301)
यी हुन् कलेजो बिग्रिएको थाहा पाउने ५ संकेत ! (1789)
Breaking News: अचानक भर्खरदेखी काठमाडौंका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (1500)
नेपालमा पहिलोपटक एकै दिन कोरोनाले छ जनाको मृत्यु (1271)
आ’फ्नै जीवनमा आधारित यति मिठो गीत रेकर्ड ग;राए अर्जुनले ..( भिडियो हेर्नुहोस् ) (1224)
काठमाडौँको एक निजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई १२ दिन राखेको बिल आयो २६ लाख तर बाचेन बिरामी, पैसा दिएपछि मात्रै सेनाले शव लैजान पायो (1156)
मलेशियामा सुरक्षा गार्ड कुट्ने सुपरभाइजरद्वारा आत्मसमर्पण, कुट्ने कुटाइ खाने दुवै नेपाली (1130)
काठमाडौंको जग्गाको मूल्याङ्कन बढेन, ललितपुरमा प्रति आना १२ सय ! (1108)
कोरोनाका बिरामीले भरिएको अस्पतालमा आज अचानक भयानक आगलागी, ८ जनाको मृ त्यु (1052)